मेरी बासैले मेरो पहिचान “मूलाको साग” भन्ने दिलाको हो ः कलाकार सुरेन्द्र के.सी | Jukson
मेरी बासैले मेरो पहिचान “मूलाको साग” भन्ने दिलाको हो ः कलाकार सुरेन्द्र के.सी
पोखरा, ०३ पुस
नेपाली टेलिश्रृखलाको क्षेत्रमा विगत ३२ वर्ष देखि निरन्तर लगानशी सक्रिय हुदै हास्यब्याङ्ग कलाकारका रुपमा आफुलाई देश र विदेशका दर्शक माझ चिनाउन सफल भएका कलाकार सुरेन्द्र के.सी जसलाई सबै नेपालीले “मूलाको साग” का रुपमा चिन्ने गरेकाछन् । नेपाली टेलिश्रृखलामा विशेष गरि दर्शकहरुले हास्यब्याङ्ग कालाकारलाई रुचाउने गर्दछन् । लाखौ दर्शकले रुचाएका कलाकार मध्य एक सुरेन्द्र के.सी “मूलाको साग” पनि हुन् ।
जकसन डटकमले वर्तमान समयमा नेपाली कलाकार टिक्न र बिक्न के गर्न पर्ला भन्ने जिज्ञषा सहित जैनव खातुनले लिएको अन्तर्वाता ः
१) आज भन्दा ३२वर्ष अघि नेपाली टेलिश्रृखलामा कलाकारको रुपमा प्रवेश गर्न तपाइलाई कसले पे्रणा दियो ?
म यहि काठमाण्डौ सानेपाको स्थायी बासीन्दा हु । त्यो समयमा आजको जस्तो कलाकार बन्नका लागि शिक्षा लिनकै लागि भनि कलाकेन्द्रहरु पनि थिएनन् । मैले भर्ख एस.एल.सि पास गरेको थिए । आफ्नो कलाकार बन्ने रहर पुरा गर्ने आट गरे तर मेरो बाबाले मलाई डाक्टर बनाउन चाहानु हुन्थ्यो ।
उहालाई मेरो कलाकार क्षेत्र मन परेको थिएन । उहाले भन्नु हुन्थ्यो यस क्षेत्रमा कुनै भविष्य नै छैन हेर्दा खेरी युवाहरुलाई आकर्षक लाग्न सक्छ तर यस पेशाको भरमा जिवनयापन गर्न कठिन छ ।
मैले बाबाको कुरा केहि बेर सुन्थे फेरी आफ्नो बाटो हिड्थे । मेरो एकेहोरो बानी देख्य पछि बाबाले मलाई कुट्नु हुन्थ्यो ता पनि लागि रहे । मैले सुरुवादका दिनमा हिन्दी फिल्महरु हेर्दै कसरी कलाकार बन्ने भनि सिकेको थिए । मलाई यस क्षेत्रमा आउन म स्वयमको चाहान मात्र थियो ।
२) तपाइको विचारमा टेलिश्रृखलाको वा चलचित्रको मध्य कुनको कलाकार बन्न सजिलो होला ?
मेरो विचारमा दुवै क्षेत्र काम गर्न सजिलो र राम्रो हुन्छ । मैले करिब २० वर्ष निकै कष्ठका साथ जिवन बिताउन परेको थियो । विगतको जस्तो दुख छैन यहिले कलाकारलाई ठुलो पर्दा होस् वा सानो पर्दा पारिश्रमिक राम्रो छ ।
अहिले राम्रा कलाकारको लागि अवसर र दाम दुवै रहेको छ । विदेशको कार्यक्रमा कलाकारको राम्रो कमाइ हुदै आएको छ । विदेश कार्यक्रममा जादा सबै खर्च आयोजकले नै व्यहोरने हुदा आफ्नो खर्च हुर्दैन, दर्शकहरुले माया गर्छन् । कम्तिमा पनि ५देखि ६लाख कमाइन्छ ।
चलिचित्रमा पनि राम्रो नै छ । एउटा चलचित्रमा काम गर्न कलाकारले ४५देखि ५० दिन दिए पुग्छ । अहिले चलिचित्रका कलाकारले ५÷६लाख कमाउने छन् ।
३) तपाइलाई सुरेन्द्र के.सी “मूलाको साग” भन्ने पहिचान मेरी बासैले दिएता पनि तपाइ अहिलो त्यहा हुन्नु, अब कहिले मेरी बासैमा देख्न पाइएला ?
मैले सुरुवामा नेपाली टेलिश्रृखला महजोडीको साथमा लालपुजामा जग्गा दलालको रुपमा काम गरेको थिए । मेरी बासैले मेरो “मूलाको साग” भन्ने पहिचान दिलाको हो । मेले मेरी बासै छाड्नुको कारण आर्थिक र नयापन नहुनु नै हो । एउटै अभिनय, एउटै शैलिको कपडा लगाइ खेतको एउटा कल्लाबाट अर्को हिड्दै कति हिड्नु नया शैलिमा पनि जान परेयो नि ।
मलाई मेरी बासैमा बोलाइ रहनु भएको छ तर नया अभिनय र उहि पहिलाको टिम भयो भने विचार गर्ने छु ।
४) अहिले तपाइको व्यस्तता कस्तो रहेको छ ?
यति खेरा बिक्रे फेल, हरके हवल्दार र माइकल ज्याक्सन टेलिश्रृखलामा नै व्यस्त रहेको छु । माइकल ज्याक्सन आधुनीक शैलिमा पनि दर्शकहरुलाई मनोरञ्जन दिन सकिन्छ भन्ने उद्धेश्यका साथ आफैले निर्देशन गरेको छु ।
विदेशमा रहेका दर्शकहरुले नेपाली टेलिश्रृखलामा नयापन आउन सक्यन भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए । माइकल ज्याक्सनले दर्शकलाई पक्कै नयापन दिने छ ।
५) नेपाली कलाकारलाई राज्यले के के गरि दिनु पर्ला ?
राज्यलाई के भन्ने जसको कुनै अर्थ नै छैन । राज्यले राज्यलाई नै समालन सकि रहेको अवस्था छैन । वर्ष देखि सडक फुटेको छन्, सडक मर्मतका लागि बजेट भएता पनि सरकारले बनाउन सकि रहेको छैन् । अचानक कलाकार बिमारी हुदा हामी कलाकारहरुले नै आपसी सहयोग र दर्शकहरुको माया साथै आर्थिक सहयोगमा नै निर्भर रहदै आएकाछौ ।
६) नया कलाकारले यस क्षेत्रमा आउन के गर्न पर्छ ?
नया कलाकारले शिप र शिक्षा लिएर आउनु पर्छ । विगतमा जस्तो छैन । अब कलकार बन्नका लागि हरेक विधामा पोक्त हुन आवश्यक छ । नेपाली कलाकारहरु नेपालमा मात्र सिमित रहेका छैन् । नया कलाकार बन्न चाहाने भाइ बहीनीहरुले शिक्षाका साथ अनुशासन रहन पनि आवश्यक देख्छु ।
७) तपाइले वितग र वर्तमानलाई कसरी हर्दै हुनु हुन्छ ?
मेरो कलाकार क्षेत्रलाई हेर्दा ३२वर्ष पुगेछ । मेरो विगत २०वर्ष दुखद् रहेयो । मसंग मेरा बाबा आमा देखि छोरा छोरी कोहि खुसि थिएनन् । कलाकार भए पनि राम्रो कमाइ थिएन । परिवार चलाउन धेरै गाह्रो भएको थियो । तर यहिले समय फेरीएको छ । कलाकार भए पनि राम्रो कमाइ छ । परिवार चलाउन दुख छैन ।
आज मेरो बाबा र छोरा छोरी सबै खुसीछन् । आर्थिक आर्य पनि राम्रो छ । मलाई यहा सम्म आइ पुग्दा मेरो यात्रामा सहयोग गर्ने महजोडी, दमन रुपखेती जसले मलाइ “मूलाको साग” भन्ने नाम दिएका थिए । उहाहरु सबैलाई सम्झिन चाहन्छु ।
महजोडीको नामाकरण गरिदिने पौडेलको उमेर १६ वर्ष की ६१ वर्ष ?
एक अर्ब बराबरको भौतिक एवं चिकित्सकीय उपकरण सहयोग
शुरु भयो योग खेलकुद प्रतियोगिता
महेन्द्र शिखरी माध्यमिक विद्यालयमा ‘नरबहादुर–सावित्री छात्रवृत्ति अक्षयकोष’ स्थापना
निर्वाचन आयोगद्वारा एमालेसहित पाँचवटा दैनिक पत्रिकालाई स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन (हेर्नुस: विज्ञप्ति सहित)